Unqulo kunye noBugcisa boLuntu
Ulwaphulo luza kwiintlobo ezahlukeneyo, kodwa ezi ntsuku zikhuselekileyo zonqulo kwaye zikhokelela ekutshatyalalisweni. Akunabo bonke ugqirha obulinganayo - kukho ukungafani okuphawulekayo kunye nobunzulu phakathi kobugwenxa benkolo nobuthixo.
Encwadini yakhe ethi Inside Terrorism , uBruce Hoffman uyabhala:
Ngogqirha yonqulo, ubundlobongela kuqala kwaye ngokugqithiseleyo isenzo se-sacramental okanye umsebenzi owenziwa nguThixo ngokuphendula ngokuthe ngqo kwiimfuno ezithile ze-theological okanye eziyimfuneko. Ulwaphulo-mthetho lunjalo luba nesimo esingaphendukiyo, kwaye abenzi balo mthetho abachaswanga yimimiselo yezopolitiko, yokuziphatha okanye yokusebenza enokuchaphazela ezinye iigebengu.
Nangona izityikima zomhlaba, nangona zikwazi ukwenza njalo, aziqhelanga ukuzama ukubulala ngokukhethekileyo ngenxa yokuba ezo ziqhinga azihambisani neenjongo zabo zezopolitiko kwaye ngenxa yoko zithathwa njengento engabonakaliyo, ukuba kungabikho okubi, iinkohlakalo zonqulo zihlala zifuna ukupheliswa Iintlobo zeentshaba ezichazwe ngokubanzi kwaye ngokubhekiselele kwintlupheko eninzi ngokukhawulezileyo kungekhona nje ngokufanelekileyo ngokuziphatha kodwa njengento ebalulekileyo ekufezekiseni iinjongo zabo. Inkolo ihanjiswa ngumbhalo oyingcwele kwaye inikezwa ngamagunya eebhaliweyo ukuba ithetha ngoThixo-ngoko isebenza njengegunya elifanelekileyo. Oku kuchaza ukuba kutheni ukubhalwa kweencwadi kubaluleke kakhulu kwiingqobhoko zonqulo kwaye kutheni kubakho abantu abanokwenkolo abafunekayo ukuba 'bazisike' (oko kukuvuma okanye ukugwetywa) ngaphambi kokuba baphunyezwe.
Amaphekula angokwenkolo nabezwe ahluke kwiindawo zabo. Nangona izityhupheli zehlabathi zizama ukukhenkcela kwiindawo ezahlukahlukeneyo eziququzelelwe ngokwenene kunye nabanokubanceda, amalungu omphakathi afuna ukuba 'awalondoloze' okanye abantu abaxhatshazelweyo abathi bathethayo, iziglogli zenkolo zize zenze i-activists kunye nezakhiwo ezibandakanyekayo malunga nemfazwe epheleleyo. Bafuna ukubhenela kungabikho omnye umbutho kunabo. Ngaloo ndlela imiqathango yokunyanzelisa ubundlobongela obuthatyathwa ngamagqabhoko angamazwe ngokufuna ukubhenela kwiindawo ezixhasayo okanye ezingavumelekiyo azibandakanyekanga kumgqugquzeli wenkolo.
Ngaphezu koko, ukungabikho kobundlobongela kwisimo sengqondo sobugwenxa kubangela ukunyanzeliswa kobundlobongela obungaphelelanga malunga noluhlu oluvulekileyo lwezinto ezijoliswe kuzo: oko kukuthi, nabani na ongeyilungu lenkolo yamaqebhoko okanye inkolo yonqulo. Oku kuchaza i-rhetoric eyaziwayo "kwi-manifestos engcwele" echaza abantu abangaphandle kweendawo zonqulo zongongoma kwiindawo zonqulo kunye neentlondi njengokomzekelo, 'abakhohlisi', 'izinja', 'oonyana bakaSathana' kunye 'nabantu abadaka'. Ukusetyenziswa ngokuzenzekelayo kweso sigama ukunyanzelisa nokucacisa ukuba ugqirha kubalulekile, ekubeni kukhankanya ngakumbi ukunyanzelisa ubundlobongela kunye nokuchitheka kwegazi ngokubonakalisa amaxhoba amagebengu njengabantu abangenanto okanye abangafanelekanga ukuba baphile.
Ekugqibeleni, izityhumbisi zonqulo kunye nezobuzwe zineengcamango ezahlukeneyo ngokwazo kunye nezobudlova. Xa izigubungela zehlabathi zibhekelana nogonyamelo njengendlela yokukhuthaza ukulungiswa kwenkqubo echanekileyo okanye njengendlela yokwenza ukuveliswa kwenkqubo entsha, iziglogli zenkolo aziboni njengengxenye yenkqubo efanelekileyo yokulondolozwa kodwa 'abangaphandle', befuna utshintsho olusisiseko kumyalelo okhoyo. Le ngqiqo yokuhlukanisa yenza ukuba ugqirha unqulo luqwalasele izinto ezininzi ezibhubhisayo kunye nezingozi ezikhuselekileyo kunezobugwenxa belizwe, kwaye ngokwenene ukufumana isigaba esiphezulu saso 'seentshaba' zokuhlaselwa.
Izinto eziphambili ezahlula unqulo olusuka kunobungqina bezobugwenxa zingakhokelela ekukhuseleni ubukhukula benkolo. Xa ubundlobongela buyisenzo se-sacramental kuneendlela zokufikelela kwiinjongo zezopolitiko, akukho mida yokuziphatha kwizinto ezinokuthi zenziwe-kwaye kubonakala ngathi kuncinci ithuba lokuhlala. Xa ubundlobongela bujoliswe ekuqheleni intshaba ebusweni bomhlaba, ukubulawa kohlanga akunakwenzeka emva.
Kakade, ngenxa yokuba iindidi ezintle kunye ezintle zikhona kwiziko lezemfundo alithethi ukuba ubomi boqobo kufuneka bulandele. Kulula kangakanani ukwahlula phakathi kweentlanga nezonqulo? Iingqungquthela zenkolo zinokuba neenjongo zezopolitiko ezichongileyo eziza kuthethwa ngazo. Amaphekula angasebenzisa inkolo ukuze athole abalandeli abaninzi kwaye avuselele ukuthanda okukhulu. Uphi unqulo kunye nokuphela komhlaba?
Ukuqinisekiswa ngokubhekiselele kwiNkundla yeNkundla
I-Agnostic Atheist - Dictionary Inkcazo
Ukuqwalasela kunye noBungqina bokuVikela kwemvelo
Ngaba uPapa uBenedict XVI (uJoseph Ratzinger) wamaNazi?
Kutheni iRhafu yeMicimbi yeNkolo
Iingxabano Zomtshato We-Gay: Umtshato Ulungiselela Ukuzaliswa
AmaSayithi aNgcwele amaSilamsi namaZwe angcwele: Ukuqhagamshelanisa ubungcwele, ezopolitiko kunye nobudlova
Yintoni Inkululeko KwiNkolo?
Iimpawu zeMfazwe zeSizwe eziLungileyo
Ukukhangela Ubomi obubophelelwe yi-Ice emhlabeni
UMongameli uBarack Obama kunye namalungelo eSigqeba
IiDassasaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-West Virginia
I-Biology Prefixes kunye ne-Suffixes: staphylo-, staphyl-
Isikhokelo soMqala kwiNguqulelo yamaProthestani
Amanqabana e-Banana: Omkhulu uGeneral Smedley Butler
Isingeniso kwiNcwadi kaLevitikus
Biography ka-Auguste Comte
Isingeniso kwiNkxaso yokuSebenza
Amandla eMantra Chanting
Izitishi zaseFransi Isigama - Ukuthatha le Treni eFransi
Ukuvukela kwamaGadi avela kwiiGali zikaGalili
Umbhalo we-1949 I-UN Resolution Calling ye-Referendum eKashmir
Yintoni Enokuziphendulela kwaye Kutheni Kubalulekile?
IsiJamani kubaQaleli: Izifundo zokuFunda
Ubume Bomculo WeBrazil